China Air Fryer၊ Lint Remover ထုတ်လုပ်သူများ၊ Steam Iron Suppliers - Chenhan
ဘက်ထရီ Lint ဖယ်ရှားရေး
အားပြန်သွင်းနိုင် Lint ကို Remover
အားပြန်သွင်းနိုင်သည့် Lint Remover အဝတ်အစား Fuzz Shaver
Lint Ball မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက် Battery Lint Remover
Lint မုတ်ဆိတ်မွေးဘက်ထရီ Lint ကိုဖယ်ရှားရေး
Air Fryer ကြက်သား
Ningbo Chenhan လျှပ်စစ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကုမ္ပဏီလီမိတက်
Ningbo Chenhan Electrical Appliances Co. , Ltd. သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်မှုဇုန်၊ နင်းဘိုမြို့တွင်တည်ရှိပြီး၊ ပင်လယ်နှင့်လေကြောင်းဖြင့်အဆင်ပြေစွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရှိပြီး၊ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းနှင့်ရှန်ဟိုင်းလေဆိပ်အနီးအနားတွင်ရှိပါသည်။ , စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်လုံလောက်သောစမ်းသပ်ခြင်းအဆောက်အ ဦ ပြီးစီးခဲ့သည်။ တီထွင်မှုအများကြီးမူပိုင်ခွင့်ဗျူရိုကမူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်များပေးထားပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို CE, GS နှင့် Rosh စစ်ဆေးခြင်းများကိုလည်းလိုက်နာပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ Lint Remover Steam Iron, Air Fryer ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်တောင်ကိုရီးယား၊ ဥရောပနှင့်ဥရောပကဲ့သို့သောနိုင်ငံများနှင့်ဒေသပေါင်း ၃၀ ကျော်တွင်ခိုင်မာသောဖွံ့ဖြိုးပြီးအရောင်းကွန်ယက်တစ်ခုရှိသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ။
ဖိအား Steam သံ
Lint မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက် Battery ကို Lover ဖယ်ရှားပေးသည်
Battery Lint Remover အဝတ်အစား Fuzz Shaver
Air Fryer ကြက်သားအတောင်များ
ကြက်ကြော်၊ ပြင်သစ်ကြော်၊ မုန့်စိမ်းထင်းစသည်ဖြင့်အစားအစာများ၊ အမှိုက်သရိုက်များလေလေပျော်ရွှင်လေလေကယ်လိုရီများလေလေဖြစ်သည်။
Air fryer လှော် T- အရိုးသားဝက်သားခုတ်ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများ, အလွန်အရသာစူပါမုန့်ညက်!
မင်္ဂလာပါ၊ အရသာရှိတဲ့အစားအစာကိုနှစ်သက်တဲ့သူတိုင်း! သင်အားလုံးသည်လေပူဖောင်းနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးအစားအစာအပူပေးရန်လှည့်သောဖရီရီရီ၏ထိပ်တွင်ခေါင်းထိပ်တွင်ရှိသည်။ ဒီနေ့ငါလေပူဖွေးတစ်ချောင်းမှာ t-tulang ဝက်သားခေါက်ကင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသင်ပေးမယ်။ လွယ်ကူတယ်၊ အရသာရှိတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းစာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အီးမေးလ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ ၂၄ နာရီအတွင်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
 ကျွမ်ကျန်းဂွမ်မြို့၊ စီစီမြို့၊ နင်ဘို၊ Zhejiang ပြည်နယ်၏ပထမဆုံး ၁ မှ ၁
မူပိုင်ခွင့်© Ningbo Chenhan Electrical Appliances Co. , Ltd. လေမှုတ်စက်၊ Lint Remover နှင့် Steam Iron All Right Reserved